Ukuhlangana kwethelevishini kanye ne-Intanethi | Martech Zone
NgoLwesibili, Septhemba 6, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Yize iGoogleTV neAppleTV zisebenzisana kahle, kubonakala sengathi lezi zinhlelo ziyiyo nje iwebhu elungiselelwe ukubukwa kuthelevishini. Sibona intuthuko kwezobuchwepheshe - bheka i-LG Pentouch (lesi yisikhangiso). Ngifisa sengathi ngabe ngibonile I-60, i-LG Pentouch Plasma ngaphambi kokuthenga ihhovisi lethu i-LCD TV:
Ngaphandle kokushintsha indlela esisebenzisa ngayo izikrini ezinkulu emsebenzini, kungenza ngizibuze nokuthi abakhangisi bangaxhumana kanjani ekhaya. Isikhathi nje ngaphambi kokuba ngikholwe ukuthi sizobona izingqimba ezisebenzayo phezu kwemibukiso nokukhangisa ukuvumela ukuxhumana… kuze kufike ezingeni lokushaya noku-oda ngqo kusuka kuzikhangiso!
Abasebenzisi bangasebenzisa imodi yePentouch ngokuchofoza okukodwa kurimothi. Kumodi yePentouch, abasebenzisi bangafinyelela kumafayela (njenge-PowerPoints) nokunye okuqukethwe kwi-PC yabo, basebenze kuwo, bahlele noma bawahambise esikrinini ngokukhululeka okukhulu. I-TV isekela ukusetshenziswa kwamapeni amabili ngasikhathi sinye, futhi amabhethri wepeni angagcwaliswa kabusha ngamachweba e-USB ngemuva kweyunithi ye-TV.
Besebenzisa isoftware ye-TV, abasebenzisi bangadweba izithombe ngqo esikrinini bese begcina amafayela ukuze aqhubeke nokuhlelwa noma ukwenziwa kwemiphumela. Uma i-PC ixhunywe kwiphrinta, abasebenzisi bangaphrinta indalo yabo yePentouch, futhi. Izici zesoftware eziyinkimbinkimbi zifaka phakathi igalari, eza nesici se-slide show esakhelwe ngaphakathi, Ikhalenda Lomndeni kanye ne-Digital Photo Frame, evumela abasebenzisi ukuthi bahlobise umsebenzi wabo ngohlaka abaluthandayo. IPentouch TV nayo ixhunywe kwi-inthanethi, ivumela ezinye izinhlelo zokusebenza ukuthi zilandwe njengoba kufiswa.
I-Pentouch TV isebenzisa isikrini sengilazi esingaklwebheki, kanye nesisho se-RGB nokukhanya okuhle kwezithombe ezi-crisper. Induduzo ebonakalayo ibuye ithuthukiswe ngomsebenzi wokulawula ubukhali obuzenzakalelayo nobuchwepheshe bokwenza imibala. Ngokulingana nomklamo wesitayela we-TruSlim Uzimele, i-Pentouch TV isebenzisa isitendi esenzelwe ngokukhethekile ukuqinisekisa ukuthi i-TV ayinciphisi lapho abanikazi basebenzisa isici se-Pentouch.